Introduction to Computer Science (မြန်မာ)
Introduction to Computer Science (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ မိတ်ဆက်) ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ . ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ လည်ပတ်မှုပုံစံကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတာပါ . ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနည်းစနစ်ကို ကွန်ပျူတာသမားတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ် .
Download 4shared ၊ Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download megaupload